Guddiga Doorashada Heer Federaal oo Digniin u diray Guddiyada Dowlad Goboleedyada (War Culus) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Guddiga Doorashada Heer Federaal oo Digniin u diray Guddiyada Dowlad Goboleedyada (War Culus)
Kuraastii la doortay Dib ayaa loo eegi doonaa, Doorasho kasta oo aan waafaqsanayn hanaanka loo asteeyey in loo maro guddiga xulista ergada waa la baarayaa
Guddiga Doorashada Heer Federaal ayaa WAR SAXAAFADEED uu soo saaray ku sheegay inay soo gaareen cabashooyin badan, isla markaana wuxuu ballan qaaday in dib u eegis lagu sameyn doono doorasho kasta oo cabasho ka timid, lana baarayo ergada iyo sida loo xulay.
Haddaba si looga fogaado wax is daba marin iyo daah furnaan la’aan doorashada ku dhacda, waxaa guddigu farayaa guddiyada doorashooyinka heer maamul goboleed in ay dhowraan, ishana ku hayaan daah-furnaanta, caddaaladda, xeerarka iyo habraaca doorashooyinka hadda socda. Guddiga ilaa iyo hadda waxaa soo gaaray cabashooyin iyo talooyin ku aaddan doorashooyinka socda.
Sidaadarteed, wuxuu guddigu ku samaynayaa badhitaanno dhammaan cabashooyinka. Waxaan bulshada Soomaaliyeed u sheegaynaa in wax kastoo baal marsan hufnaanta doorashada uusan guddigu marna aqbali doonin. Annagoo ugu baaqayna tartamayaasha iyo daneeyayasha doorashada in ay wixii cabasho ah u maraan hanaanka loo dejiyey in wax looga qabto murannada doorashada, iyadoo ay dhisan yihiin guddiyaddii loogu tala galay in ay wax ka qabtaan.
Guddiyada doorashooyinka maamulaya waa guddiyo ka madax-bannaan siyaasadda iyo fara-gelinta siyaasi. Sidaa awgeed, waxaan faraynaa dhammaan guddiyada in ay waajibaadkooda u gutaan simadax-bannaan oo caddaalad ah.
Waxaa kale oo aan madaxda Qaranka ku boorinaynaa in ay u madax baneeyaan hawlahooda doorashada, ayna ka caawiyaan adeegyada muhiimka ah ee ay u bahan yihiin, sida amniga iyo taakulaynta saad.
Previous articleC/casiis Lafta-gareen oo Prof. Jawaari ka hor istaagay Kursi xildhibaan iyo Musharaxa loo wado (Akhriso)
Next articleFaahfaahin: Qaraxii Is-miidaaminta ee Muqdisho iyo Alshabaab oo War kasoo saartay Cidda la beegsaday